Peixin sonyere na IDEA 2019 Ngosipụta a kpara akpa na Miami USA | PEIXIN
IDEA® 2019, ihe omume ụwa buru ibu maka ndị na - abụghị ndị na - ahụ maka ọrụ na ndị ọkachamara akwa akwa, nabatara 6,500+ ndị sonyere na ụlọ ọrụ 509 na - egosi ụlọ ọrụ 75 na - agafe n'usoro a na - ere ahịa iji mee njikọta izu gara aga na Miami Beach, FL.
Agba nke 20 nke IDEA® 2019, Mach 25-28 mebiri ndekọ ngosipụta maka ihe omume na-ejuputa 168,600 square ụkwụ nke ebe ngosi ihe (15,663 square) n'ime ebe a na-eme ụlọ ọhụrụ Mgbakọ Beach nke a na-emezigharị. Ihe ndekọ ọhụrụ na-anọchite ịrị elu pasent itoolu na oghere ngosi karịa IDEA® 2016 ka ndị sonyere na ụlọ ọrụ gosipụtara ntụkwasị obi azụmahịa ha site na ụlọ ọrụ ngosi buru ibu.
Ihe omume afọ iri a nke INDA haziri ahaziri klas ọzụzụ ọzụzụ asaa a na-adịghị akwụ ụgwọ, ngosipụta ahịa sitere na China, Eshia, Europe, North America na South America, ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntinye aka na IDEA®, Mmepe Ego Mmepe IDEA®, na nnabata nnabata. Oge ncheta 50 nke INDA.
Ndị na-eme ihe ngosi na ndị bịaranụ kwuru banyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị isi ụlọ ọrụ na-esonye na ememe ụbọchị atọ ahụ. "IDEA nyere ndị metrik siri ike na ọnụnọ ndị isi nke afọ a. Ihe omume ahụ dọtara ọkwa dị elu nke ndị na-ekpebi mkpebi, ihe akaebe maka mkpa ihe dị n'etiti ụlọ ọrụ mba ụwa na ụlọ ọrụ injinia, ”Dave Rousse, Onye isi oche INDA kwuru.
Panty Liner , Wet Wipes , Mini Pad Production Line , Nwanyị Pad Machine , Pul Up Machine , Machine Hygiene Daily ,